Application Tilmicosin Phosphate chinhu macrolide asingaurayiwi chinodhaka, ndicho ndiwedzere zvinobva tylosin phosphate uye zvikuru kushandiswa wemhuka. Hazvina harmfulless, navakasara akasununguka, pamwe simba effection uye kuchengeteka. It zvikurukuru anorapa kuti kufema chirwere kuti anokonzerwa mycoplasma, mhuka infective pleuropneumonia kuti kunokonzerwa actinobacillus uye pasteurella multocida uye zamu chirwere mhuka lactational. The mushonga nezvinozoitika 4 kusvika 8 nguva pane tylosin phosphate. Panguva imwe cheteyo, izvozvo H ...
Products munyika yose, Thai-nyika, Germany, Brzail uye zvichingodaro.
R & D uye Chitupa Régis-tration - Tilmicosin Phosphate.
Safety Standardization ndiro kupfuura mitemo yenyika.
With akazvimirira Michina tsvakurudza uye developpment pakati.
Kukosha Of Antibacterials Of Veterinary Drugs
Chimwe ndechokuti wemhuka mishonga kwakaita zvinopfuura zvakawanda. The chidzoke uye kushandisa mishonga inorwisa mabhakitiriya chishamiso munhoroondo mushonga yevanhu, ingaita mupiro zvisingafi kuti utano hwevanhu.
View zvakawanda >>
Mangwanani April rechi14, 2018, boka redu akaronga vashandi vose kudzidza zvebhizimisi tsika kudzidzisa, pashure maawa maviri nehafu kudzidza, isu vakabatsirwa uye akawana mumwe mujenya.
Ceftiofur Hydrochloride powder , Ceftiofur Hydrochloride With Gmp , Ceftiofur Hydrochloride 103980-44-5 , Tilmicosin 25% Oral Solution, Ceftiofur Injection For Animal, Ceftiofur Antibiotic,